Inqubomgomo yekhukhi | I-Rward Foundation - Uthando, Ubulili kanye ne-Intanethi
Ikhaya Cookie yemfihlo
Amakhukhi nokuthi bakuzuzisa kanjani
Leli khasi libeka inqubomgomo yekhukhi ye-The Reward Foundation. Iwebhusayithi yethu isebenzisa amakhukhi, njengoba cishe wonke amawebhusayithi enza, ukukusiza ukukunikeza okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu esingakwenza. Ama-cookies amancane amafayela wombhalo afakwa kwikhompyutha yakho noma efonini ephathekayo uma upheqa amawebhusayithi. Ukwaziswa okwenziwe amakhukhi akubonakali ngokwakho, kepha kungasetshenziselwa ukunikeza ulwazi olwengeziwe lomuntu webhu. Uma ufuna ukufunda kabanzi mayelana nokusetshenziswa okujwayelekile kwamakhukhi, sicela uvakashele I-Cookiepedia - konke mayelana namakhukhi.
Amakhukhi ethu asisiza:
Yenza iwebhusayithi yethu isebenze ngendlela obungayilindela
Khumbula izilungiselelo zakho phakathi nokuvakashelwa phakathi nesikhathi
Thuthukisa isivinini / ukuphepha kwesayithi
Ukuvumela ukuthi wabelane ngamakhasi ngamanethiwekhi omphakathi njenge-Facebook
Qhubeka ngokuqhubekayo iwebhusayithi yethu kuwe
Yenza ukumaketha kwethu kuphumelele kakhulu (ekugcineni kusisize ukunikeza inkonzo esenza ngenani esenzayo)
Asisebenzisi amakhukhi ku:
Qoqa noma yiluphi ulwazi olubonakalayo lomuntu siqu (ngaphandle kwemvume yakho ecacile)
Qoqa noma yiluphi ulwazi olubucayi (ngaphandle kwemvume yakho ecacile)
Dlulisa idatha kumanethiwekhi wokukhangisa
Dlulisa idatha ebonakalayo kubantu besithathu
Khokha amakhomishini wokuthengisa
Ungafunda kabanzi mayelana nawo wonke amakhukhi esiwasebenzisa ngezansi
Ukunikeza imvume yokusebenzisa amakhukhi
Uma izilungiselelo kwisofthiwe yakho oyisebenzisayo ukubuka lewebhusayithi (isiphequluli sakho) ishintshwe ukwamukela amakhukhi sithatha lokhu, nokusetshenziswa kwakho okuqhubekayo kwewebsite yethu, ukusho ukuthi ulungile ngalokhu. Uma ufisa ukususa noma ungasebenzisi amakhukhi asuka kusayithi lethu ungafunda ukuthi ungakwenza kanjani lokhu ngezansi, noma ngabe ukwenza kanjalo kuyosho ukuthi isayithi lethu ngeke lisebenze njengoba ungalindela.
Iwebhusayithi Yomsebenzi Amakhukhi: Amakhukhi ethu
Sisebenzisa amakhukhi ukwenza umsebenzi wethu wewebhu uhlanganise:
Ukukhumbula izilungiselelo zakho zokusesha
Ayikho indlela yokuvimbela lawa makhukhi abekwe amanye ngaphandle kokusebenzisa isayithi lethu.
Amakhukhi akuleli sayithi asethwe yi-Google Analytics ne-The Reward Foundation.
Isayithi lethu, njengamawebhusayithi amaningi, kufaka phakathi ukusebenza okuhlinzekwe ngabangaphandle. Isibonelo esivamile yisividiyo se-YouTube esihlanganisiwe. Isayithi lethu liqukethe okulandelayo okusebenzisa amakhukhi:
I-Google (YouTube) - Inqubomgomo yobumfihlo
Ukukhubaza la makhukhi kuzohlephula imisebenzi ehlinzekwa yizigaba zangaphandle
Amakhukhi we-Social Social
Ngakho-ke ungakwazi 'ukuthanda' kalula noma wabelane ngokuqukethwe kwethu kumasayithi afana ne-Facebook ne-Twitter sifake izinkinobho zokwabelana kusayithi lethu.
Amakhukhi ahlelwe ngu:
Imithelela yobumfihlo kulokhu izohluka kusuka kunethiwekhi yomphakathi kuya kwinethiwekhi yomphakathi futhi izoxhomeka kuzilungiselelo zobumfihlo ozikhethile kulezi amanethiwekhi.
I-Visitor Statistics Statistics Amakhukhi
Sisebenzisa amakhukhi ukuhlanganisa izibalo zezivakashi ezinjengokuthi bangaki abantu abavakashele iwebhusayithi yethu, basebenzisa hlobo luni lobuchwepheshe (isb. IMac noma iWindows esiza ukubona lapho isayithi lethu lingasebenzi njengoba kufanele kubuchwepheshe obuthile), isikhathi esingakanani abachitha esizeni, babheka maphi amakhasi njll. Lokhu kusisiza ukuthi sithuthukise ngokuqhubekayo iwebhusayithi yethu. Lokhu okubizwa ngama-analytics ?? izinhlelo futhi zisitshela, ngendlela engaziwa, ukuthi abantu bafike kanjani kule sayithi (isb kusuka enjini yokusesha) nokuthi ngabe bake baba lapha ngaphambi kokusisiza ukunquma ukuthi yikuphi okuqukethwe okuthandwa kakhulu.
I-Google Analytics. Ungathola okuningi ngabo lapha.
Sisebenzisa futhi nokubika kwe-Google Analytics 'Demographics and Interest, okusinikeza ukubonwa okungaziwa kobudala nobudala nezivakashi zabavakashi esizeni sethu. Singasebenzisa le datha ukuze sithuthukise izinsizakalo zethu kanye / noma okuqukethwe.
Ungakwazi ukushintsha amakhukhi ngokulungisa izilungiselelo zesiphequluli sakho ukuze usivimbe ekwamukeleni amakhukhi (Funda ukuthi ungakwenza kanjani lapha). Ukwenza kanjalo kepha kuzonciphisa ukusebenza kwethu kanye nengxenye enkulu yamawebhusayithi omhlaba, ngoba amakhukhi ayingxenye ejwayelekile yamawebhusayithi amaningi anamuhla
Kungenzeka ukuthi ukhathazeka ngamakhukhi ahlobene nalokho okubizwa nge- “spyware”. Esikhundleni sokucima amakhukhi esipheqululini sakho ungathola ukuthi isoftware elwa ne-spyware izuza inhloso efanayo ngokususa amakhukhi ngokuzenzakalela athathwa njengongenayo. Funda kabanzi mayelana ukulawula amakhukhi nge-software ye-antispyware.
Umbhalo wolwazi lwekhukhi kuleli sayithi lusekelwe kokuqukethwe okuhlinzekwe yi-Attacat Internet Marketing http://www.attacat.co.uk/, i-ejensi yokumaketha esekelwe e-Edinburgh. Uma udinga ulwazi olufanayo kwiwebhusayithi yakho ungayisebenzisa ithuluzi lokuhlola lokukhukhi yamahhala.
Uma usebenzise i Ungalandeli isilungiselelo sesiphequluli, sithatha lokhu njengesibonakaliso sokuthi awufuni ukuvumela lawa makhukhi, futhi azovinjelwa. Lezi izilungiselelo esizivimbayo: